प्रहरी र विप्लव समूहका कार्यकर्ताबीच गोली हानाहान दुवैतर्फ १/१ जनाको मृत्यु - Namasteholland, News, Information and Technology
भोजपुर । भोजपुरमा प्रहरी र विप्लव समूहका कार्यकर्ताबीच दोहोरो गोली हानाहान भएको छ । गोली हानाहान हुँदा एक प्रहरीसहित दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।
बुधबार बिहान दुई पक्षबीच भिडन्त हुँदा प्रहरीका एक तथा विप्लव समूहका एक जनाको मृत्यु भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरका अुनसार भिडन्तमा प्रहरी जवान सञ्जिव राई र विप्लवका कार्यकर्ता निरकुमार राईको मृत्यु भएको छ ।
घटना सदरमुमा रहेको शनिबारे हाट लाग्ने ठाउँमा भएको हो । विप्लव समूहका कार्यकर्ता र प्रहरीको भेट हुँदा विप्लव समूहका कार्यकर्ताले गोली हानेपछि जवाफी कारबाहीका रुपमा गोली हानेको बताइएको छ । घटनाको थप विवरण आउन बाँकी रहेको छ ।
ओलीले सरकारले आगामी बजेटमा वृद्धभत्ता बढाउने घोषणा
Hey Buddy!, I found this information for you: "प्रहरी र विप्लव समूहका कार्यकर्ताबीच गोली हानाहान दुवैतर्फ १/१ जनाको मृत्यु". Here is the website link: https://www.namasteholland.com/%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b0-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%b5-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%82%e0%a4%b9%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%be/. Thank you.